Canton တရားမျှတသော 2021 ဆောင်းဦးရာသီ, တရုတ်သွင်းကုန်နှင့်ပို့ကုန်တရားမျှတသော
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်နှင့်အင်ဒိုနီးရှားနှင့်အခြားနိုင်ငံများမှထုတ်ကုန်များကိုစျေး ၀ ယ်ရန်စိတ်ဝင်စားပါကကျွန်ုပ်အားဖိတ်ကြားပါ။ ...
Expo မှာငါပါဝင်နိုင်လား။ ဒီပြပွဲကိုငါဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲ။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်လာမည့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကွန်ဒိုနှင့်တိုက်ခန်းကုန်စည်ပြပွဲအတွက်သင်၏ပွဲအတွက်မေးမြန်းရန်လိုပါသည်။ မင်းသိရင်ငါ့ကိုပြောပြနိုင်မလား ...
အဆိုပါ 130th Canton Fair ကိုအဆင့်သုံးဆင့်မှအဆင့်တစ်ခုအထိညှိလိမ့်မည်။ ၁၃၀th Canton Fair ကိုအောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်မှ ၁၉ ရက်အထိအွန်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းနှစ်ခုလုံးတွင်ကျင်းပလိမ့်မည်။ ကဏ္ 15 ၅၁ ခုတွင်ထုတ်ကုန်အမျိုးအစား ၁၆ ခုကိုပြသလိမ့်မည်။ ပြည်တွင်းပြပွဲဧရိယာသည်စတုရန်းမီတာ ၄၀၀ ၀ န်းကျင်အထိကျယ်ပြန့်ပြီးကုန်အမှတ်တံဆိပ်လုပ်ငန်းများသည်အဓိကပြခန်းများဖြစ်ကာပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာသို့ဖြန့်ဖြူးရန်အရည်အသွေးမြင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ပြပွဲတစ်ခုကိုဖန်တီးရန်အာရုံစိုက်သည်။ အွန်လိုင်းပြပွဲသည်ပြခန်းပေါင်း ၆၀၀၀၀ ကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးအွန်လိုင်းအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ငန်းနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ၀ ယ်သူ ၂၆၀၀၀ အတွက်ဆက်လက်ပံ့ပိုးပေးလိမ့်မည်။
သင်လုပ်နိုင်သည် သင်၏တရုတ်အေးဂျင့်များကိုယုံကြည်စွာအပ်နှံပါ Fair Offline ကိုတက်ရောက်ဖို့
VR ပြပွဲခန်းမ၊ VR ပြခန်း Global Business Matchmaking နှင့်အွန်လိုင်းပြပွဲတို့သည်တိုက်ရိုက်ပြပွဲများဖြစ်သည်။ ၀ ယ်သူအသစ်များသည်အချက်အလက်ငါးချက်ဖြည့်ရုံဖြင့်တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်မှတ်ပုံတင်နိုင်သည်။ ပုံမှန် ၀ ယ်ယူသူများသည်၎င်းတို့၏တံဆိပ် (သို့) ID (နိုင်ငံကူးလက်မှတ်) နံပါတ်ကိုအတည်ပြုခြင်းဖြင့်ဝင်ရောက်နိုင်သည်။ အဆင့်သုံးဆင့်ခွဲမယ့်အစားမတူညီတဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းတွေကပြသသူအားလုံးကိုစုစုပေါင်း ၁၀ ရက်တစ်ရက်တစ်ရက် ၂၄ နာရီတစ်ချိန်တည်းပြသသွားမှာပါ။ ပြပွဲကဏ္ categories ၅၀၊ ကဏ္ categories ၁၆ ခု၊ ထုတ်ကုန် ၂.၄ သန်းကျော်သည်တရုတ်ပို့ကုန်အမျိုးအစားအားလုံးနီးပါးကိုပြသသည်။ ဒီမှာအွန်လိုင်း Exhibitor & Exhibits ကိုကြည့်ပါ.
၁၃၀ ကြိမ်မြောက် Canton ပွဲ၊ သင်လုပ်နိုင်သည် သင်၏တရုတ်အေးဂျင့်များကိုယုံကြည်စွာအပ်နှံပါ Fair Offline ကိုတက်ရောက်ဖို့
သတိပြုရန်၊ အောက်ပါအချက်အလက်များသည် ၁၃၀ ကြိမ်မြောက် Canton Fair အတွက်မဟုတ်ဘဲပုံမှန် Canton Fair အတွက်သာဖြစ်သည်။
Canton Fair သို့တက်ရောက်ရန် Canton Fair ဖိတ်ကြားခြင်းသည် ၀ ယ်သူတံဆိပ်တစ်ခုအတွက်တရုတ်ဗီဇာနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းရရှိရန်ကူညီနိုင်သည်။
Canton Fair၊ တရုတ်သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်ပြပွဲဇယားအတွက်ရက်စွဲများ
Canton တရားမျှတသောအဆင့်၏ပြသခဲ့သည် & ထုတ်ကုန်များ
Canton တရားမျှတသောဖိတ်ကြားလွှာဘို့ Apply
Canton Fair Floor Plan - ပြသထားသော Layout
အဆိုပါ Canton တရားမျှတသောမှသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
1 ၏စာမျက်နှာ 7
ဘယ်လို Canton တရားမျှတသောဝယ်တံဆိပ်ရပါသလဲ?
Canton တရားမျှတသောဘယ်မြို့လဲ? အဘယ်ကြောင့် "Canton တရားမျှတသော" အမည်ရှိ?
Canton တရားမျှတသော၏3အဆင့်အကြားကွာခြားချက်ကဘာလဲ?